Jorge Molist: «Ndine hukuru hwekuda kuziva uye chishuwo chekudzidza» | Zvazvino Zvinyorwa
Mufananidzo: Jorge Molist. Facebook nhoroondo.
Mashoma ekunyora mabasa akafanana neayo e George Molist, kwete munhoroondo yenhau, asi zvakajairika. Uyu munyori weBarcelona asayina mazita anozivikanwa akadai se Mambokadzi akavanzika (Alfonso X Historical Novel Mubairo), Ndivimbise kuti uchave wakasununguka, kana izvo Rwiyo rweropa negoridhe, rake rekupedzisira basa raive Fernando Lara 2nd18 Mubayiro.
Yakadudzirwa kune anopfuura 20 mitauro, ndipei ini iyi hurukuro kwaanotiudza nezvake mabhuku ekutanga, pesvedzero nevanyori vaunoda kana yako chirongwa chekupedzisira zvinyorwa. Kutenda kuzhinji yenguva yako uye mutsa.
Kutaurirana naJORGE MOLIST
JORGE MOLIST: Zvakanaka bhuku rekutanga rinofanira kunge raive rimwe reavo nyaya dzine cutout silhouette inozivikanwa mumakumi mashanu: Muti we chestnut, Gwai diki, nezvimwe. Gare gare, muraibhurari yevana vemunharaunda, ndakaverenga Babar, Tintin, mumwe Salgari, Chikunguru Verne...
Nyaya yekutanga yandinorangarira kunyora yaive nyaya nezvenguva yemashiripiti uko zvinhu kubva muchitoro antiquarian vakava vapenyu uye vakafunga. Akakunda mubairo kuchikoro chesekondari. Vakandipa bhuku rakanzi Nhaka muAfrica, izvo zviri pachena kuti ndinochengeta zvine rudo. ndanga ndine makore gumi nemaviri.
JM: Zvakaoma kupindura nekuti zvakawanda zvakandibata. Ngatitii yaive Chakavanzika cheiyo unicornnaTintin.
JM: Zvakaoma kutaura nekuti ndine akawanda. Uye ini ndoda kumbotaura mabasa aunofarira pane vanyori. Asi ngatitangei nazvo Homer, munguva dzekare, ngatipfuurirei Joanot weMartorell muMiddle Ages uye a Ken follet munguva yedu.
JM: William weBaskerville de Zita rerosi. Hapana mubvunzo.
JM: Hapana. Sezvo ese ari maviri asingabvumirwe hunhu kwandiri, ndinonyora uye kuverenga kwese uye chero zvakadaro.
JM: Ndakatanga kunyora, zvishoma zvakakomba, kuti ndizvipe mushure mebasa. Uye sezvo panguva iyoyo ndakafamba zvakawanda, ndichiverenga nekunyora mu plane, in hotera, in Tren kana munzvimbo dzisingatarisirwi zvakanyanya. Nhasi masikati chero nzvimbo zvichakanaka. Asi, pasina kumanikidzwa kunamatira kune yakasimba purogiramu yebasa, ini ndinoda kuzviita. Mumubhedha, chaipo mushure mekumuka kana usati warara.
JM: Vazhinji, ini handigone kutaura imwe kunyanya. Kubva kuna Homer ne Odyssey e Iliad, kuna Ken Follet na Mbiru dzenyika, achipfuura nemuWalter Scott ne Ivanhoekana Chiremba, naNowa Gordon, Pérez Galdós nevamwe vazhinji.
JM: handina Unofarira genre, kunze kwenhoroondo. Zvandinazvo ndeye kuda kukuru uye kuda kudzidza, izvo zvinoita kuti ndiverenge zvakawanda Ensayo, kunyanya nhoroondo. Asi ini ndakaverenga kuita izvo zvinowira mumaoko angu uye zvine simba reku kukochekera.
JM: Zvakanaka, panguva ino yekuchinjana kolme mabhuku: imwe pahupenyu hwezuva nezuva hwezana regumi nemana remakore, kubva Montserrat Rumbau, imwe nezve Templars, de Helen nicholson, uye chetatu kubva muzana ramakore rechi XNUMX kusvika kuXNUMX zvinofungidzirwa kuti nhoroondo yeupenyu hwakanyorwa kuti Hupenyu hwemukuru uyu, ivo Alonso de Contreras.
Ndiri kunyora ikozvino a nhoroondo ye zana regumi nematatu chii chine chekuita naye tembere and the Mediterranean.
JM: Izvo zvakanaka kuti kune yakawanda munyori unoda kutumira. Kubva ipapo kuchauya nyaya dzemhando yepamusoro. Kune vanyori zvakaoma, asi iyo unhu, the kukosha iyo inopihwa muverengi, ndizvo primary. Nekuti vaverengi vanosarudza zuva rega rega ivo vanopedza nguva yavo yekuzorora. Kana zvikapihwa mabhuku anonakidza, achasarudza kuverenga pamberi peterevhizheni, mitambo yemavhidhiyo kana chero imwe varaidzo.
JM: Zvese zvinopa muhupenyu kana isu tichiedza kuburitsa izvo zvakanaka. Handizive kana chiitiko ichi chichizopa kune angu enguva yemberi, asi unofanira kurarama uye kurarama.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Hurukuro » Jorge Molist: «Ndine hukuru hwekuda kuziva uye chishuwo chekudzidza»